Iyo Ubuntu 20.10 beta yave kuwanikwa uye idzi ndidzo nhau dzayo | Kubva kuLinux
Iyo Ubuntu 20.10 beta yave kuwanikwa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Iyo beta vhezheni yeUbuntu 20.10 "Groovy Gorilla" yakatoburitswa kare uye inowanikwa kuongororwa kuvanhu vese. Kuburitswa uku kunoenderera kuratidza kutonhora kwakazara kubva pazasi pepakeji uye ndokuenderera kumberi kwekuyedzwa kwekupedzisira uye kugadzirisa bug.
Sevazhinji venyu muchazoziva, iyo xx.10 vhezheni idzo dzine mwedzi mishoma yekutsigirwa uye idzo dzinoburitswa kuitira kugadzirisa akasiyana maficha ekugovera, kuunza zvirevo uye shanduko yeinotevera LTS vhezheni inozove Ubuntu 22.04 LTS.
1 Main nyowani maficha eUbuntu 20.10 "Groovy Gorilla" beta
2 Dhawunirodha uye tora Ubuntu 20.10
Main nyowani maficha eUbuntu 20.10 "Groovy Gorilla" beta
Mune beta vhezheni yeUbuntu 20.10, isu tinokwanisa kuwana shanduro dzakagadziridzwa dze akati wandei eesystem application.
Uye ndezvekuti mune zvehunyanzvi mazwi, imwe yezvinhu zvitsva zveiyi vhezheni itsva Ubuntu 20.10 nemavara ayo epamutemo (Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Mate, Studio, nezvimwewo) ndiyo Linux 5.8 kernel, iyo inoonekwa seimwe yemasoja akakura kwazvo munhoroondo uye iyo inowedzera huwandu hukuru hwekuvandudzwa kune vatyairi, rutsigiro uye nezvimwe.
Padivi redesktop yakagadziridzwa kuita GNOME 3.38 mariri iyo yekugadzirisa, muchikamu chekushandisa chemushandisi, iwe unogona ikozvino kumisikidza kudzora kwevabereki kumaakaundi akaundi. Kune munhu akapihwa mushandisi, unogona kudzivirira mamwe mapurogiramu akaiswa kubva pakuonekwa mune ezvinyorwa zvinyorwa. Yevabereki Kudzora yakavakirwa zvakare mune Yekushandisa Kuisa maneja uye inokutendera iwe kubvumidza kumisikidzwa kweakasarudzika mapurogiramu.
Iyo yekumisikidza inosvitsa nyowani yeminwe yekutarisa yekumisidzana yekusimbiswa neminwe yeminwe sensors.
Wakawedzera sarudzo yekuvharidzira kumisikidza kwemvumo isina kubvumidzwa USB zvishandiso zvakabatana panguva yekuvhara screen.
Zvimwe zvinoshandiswa zvakagadziridzwa zvaive zve Python, Ruby, Perl uye PHP uye yakagadziridzwa system system senge PulseAudio, BlueZ uye NetworkManager.
Nezve iyo system kurongedza, mune iyi nyowani vhezheni nyowani vhezheni yehofisi suite yakafungidzirwa FreeOffice 7.0.
Nezve shanduko dzinomira pachena, tinogona kuzviwana shanduko yekushandiswa kwematafura ematafura akaitwa yeiyo default packet firita.
Kuti urambe uchienderana nekudzokera kumashure, iyo iptables-nft package inowanikwa, iyo inopa zvinoshanda neiyo imwecheteyo yekuraira mutsara syntax semuma iptables, asi inoshandura mhedzisiro mhedzisiro mu bytecode nf_tables.
Yakawedzera lkugona kubvumidza Active Directory sisitimu kune iyo Ubiquity simaki.
Popcon package yakabviswa (mukurumbira wemakwikwi) weiyo main line, iyo yaishandiswa kuendesa isingazivikanwe telemetry nezve kurodha pasi, kuisa, kugadzirisa uye kubvisa mapakeji.
Kubva pane iyo data yakaunganidzwa, mishumo yakaitwa pamusoro pekuzivikanwa kwezvikumbiro uye zvivakwa zvakashandiswa, izvo zvakashandiswa nevagadziri kuita sarudzo nezve kubatanidzwa kwezvimwe zvirongwa mukutanga dhirivhari.
Popcon yanga ichitumira kubva 2006, asi kubvira pakaburitswa Ubuntu 18.04, pasuru iyi pamwe neyakawiriraniswa neserver server yaputswa.
Kuwanika kune iyo / usr / bin / dmesg utility inorambidzwa kune vashandisi veboka re "adm". Icho chikonzero chakataurwa ndiko kuvapo kweruzivo mune iyo dmesg kuburitsa iyo vapambi vanogona kushandisa kufambisa kugadzirwa kwezviitwa zveropafadzo kukura.
Somuenzaniso, dmesg inoratidza stack dump kuitira kana tsaona uye ine kugona kutsanangura maumbirwo edzimba mune kernel iyo inogona kubatsira kupfuura nzira yeKASLR.
Chekupedzisira, kune avo vanoda kurodha pasi uye nekuisa iyi beta vhezheni yeUbuntu pamakomputa avo kana kugona kuiyedza mumushini chaiwo, Ivo vanofanirwa kurodha pasi iyo system mufananidzo kubva kune yepamutemo webhusaiti yeiyo system.
Chekupedzisira, zvinofanirwa kutaurwa kuti kuvhurwa kwakarongerwa Gumiguru 22.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Iyo Ubuntu 20.10 beta yave kuwanikwa uye idzi ndidzo nhau dzayo
KaOS 2020.09 inowanikwa ne theme theme, maapplication matsva uye zvimwe
EndeavorOS 2020.09.20 yakatoburitswa uye inosvika nerutsigiro rweARM board